ထိခိုက်မှုစမ်းသပ်ခြင်းစက် စက်ရုံ - China Impact Testing Machine ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
DRK136B ရုပ်ရှင် Pendulum ထိခိုက်မှုစက်
DRK136B ရုပ်ရှင်ရိုက်ခတ်မှုစမ်းသပ်ကိရိယာသည် ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်များ၊ စာရွက်များ၊ ပေါင်းစပ်ရုပ်ရှင်များ၊ သတ္တုပါးလွှာများနှင့် အခြားပစ္စည်းများ၏ ချိန်သီးရိုက်ခတ်မှုခံနိုင်ရည်အား တိကျစွာဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်စွာ သင့်လျော်ပါသည်။အင်္ဂါရပ်များ 1. အကွာအဝေးကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး အီလက်ထရွန်းနစ် တိုင်းတာမှုသည် အမျိုးမျိုးသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် စစ်ဆေးမှုကို အလွယ်တကူနှင့် တိကျစွာ သိရှိနားလည်နိုင်သည် 2. နမူနာအား နမူနာဖြင့် ဖိထားကာ၊ ချိန်သီးအား နူမာစနစ်ဖြင့် ထုတ်လွှတ်ပေးပြီး အဆင့်ချိန်ညှိမှု အရန်စနစ်သည် စနစ်အမှားကို ထိရောက်စွာ ရှောင်ရှားနိုင်သည်...
DRK136A ရုပ်ရှင် Pendulum ထိခိုက်မှုစက်
ပလတ်စတစ်နှင့် ရာဘာကဲ့သို့သော သတ္တုမဟုတ်သော ပစ္စည်းများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရန် DRK136 ဖလင်သက်ရောက်မှု စမ်းသပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုထားသည်။အင်္ဂါရပ်များ စက်သည် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှုနှင့် မြင့်မားသောစမ်းသပ်တိကျမှုရှိသော တူရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။Applications ၎င်းသည် ပလပ်စတစ်ဖလင်၊ စာရွက်နှင့် ပေါင်းစပ်ဖလင်များ၏ ချိန်သီးရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ PE/PP ပေါင်းစပ်ရုပ်ရှင်၊ အလူမီနီယမ်ဖလင်၊ အလူမီနီယံ-ပလပ်စတစ် ပေါင်းစပ်ရုပ်ရှင်၊ နိုင်လွန်ဖလင် စသည်တို့သည် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးထုပ်ပိုးအိတ်များအတွက် အသုံးပြုသည့် t...
DRK135 ပြုတ်ကျသော လှံတံသက်ရောက်မှု စမ်းသပ်ကိရိယာကို 1mm အောက်အထူရှိသော လွတ်လွတ်ကျလာသော မြားများ၏ အမြင့်သက်ရောက်မှုအောက်တွင် ပလပ်စတစ်ဖလင် သို့မဟုတ် အမှုန်အမွှားများ၏ 50% ၏ ထုထည်နှင့် စွမ်းအင်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။dart drop test သည် လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်နည်းလမ်းကို မကြာခဏ ရွေးချယ်လေ့ရှိပြီး အဆင့်နည်းလမ်းကို dart drop impact A method နှင့် B method ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။နှစ်ခုကြားခြားနားချက်- လှံခေါင်း၏အချင်း၊ ပစ္စည်းနှင့် ပြုတ်ကျသည့်အမြင့် ကွာခြားသည်။ယေဘူယျအားဖြင့်...
DRK140 ကြီးမားသောဘောလုံးသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်ကိရိယာအား ကြီးမားသောဘောလုံးများ၏သက်ရောက်မှုကိုခုခံရန်စမ်းသပ်မျက်နှာပြင်၏စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် • စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်း- မျက်နှာပြင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိသောအခါ (သို့မဟုတ် ကြီးမားသောဘောလုံး၏အချင်းထက်သေးငယ်သည်)5ကြိမ်ဆက်တိုက်အောင်မြင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများပြီးနောက် ထုတ်လုပ်လိုက်သောအမြင့်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။အသုံးချမှုများ •Laminated board ၏အင်္ဂါရပ်များ • အလူမီနီယမ်ဖရိန်တည်ဆောက်မှု • အစိုင်အခဲစတီးအောက်ခြေပန်းကန်အရွယ်အစား- 880mm×550mm •Sample clamp: 270mm×270mm • Steel ball လုံးပတ်-...